We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နယူးယောက် မှာ အရေးပေါ် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နယူးယောက် မှာ အရေးပေါ် တွေ့ဆုံ
အမေရိကန် နိုင်ငံ အင်ဒီယားနား ပြည်နယ် ဖို့ဝိန်း မြို့ ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာ့လူထု
ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံအပါအ၀င် အမေရိကန်နိုင်ငံသား များ မှ တခဲနက် ထောက်ခံ ကြိုဆိုခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် သူမ ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က နာရီပိုင်းအတွင်း နယူးယောက်မြို့ မှာ အရေးပေါ်တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အခုဆို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံ နေပါပြီ။
ဘာတွေဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတာ က တော့ အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ … ခိုင်လုံ တဲ့ သတင်းများအရ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် များရဲ့ ထောက်ခံမှုတွေရရှိဖို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အကြံဥာဏ် သဘောထား အမြင်များကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ အကူအညီပေးဖို့ ကိုလည်း တောင်းခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပန်ကြားမှုကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လည်ပတ်နေစဉ် ခရီးစဉ်တချို့ကိုလည်း ရွှေ့ဆိုင်းကောင်း ရွေှ့ဆိုင်းရဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Dမိုကရေစီရတာနဲ့ ပြဿနာအားလုံး ပြေလည်လိမ့်မယ်လို့ မြန်မာတွေယူဆနေတာ အလွန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးကာလမှာ ပရမ်းပတာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်လာတာကို မြန်မာတွေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ့မလားလို့လည်း မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးဟာ အထက်ကအောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ထိန်းနိုင်မယ်ထင်လို့ လုပ်ပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Daw Su and ဦးသိန်းစိန်သာ ဆိုဗိယက်ခေါင်းဆောင် ဂိုဘာချော့နဲ့ တူနေရင်တော့ မြန်မာပြည်အတွက် မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
26 September 2012 at 05:49
အထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီ မြန်မာပြည်တွင် ၆ရက်ကြာ ရောက်ရှိစဉ် တွေ့ဆုံရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရုပ်မြင်သံကြား ညနေပိုင်းသတင်းတွင် စနေနေ့က ကြေညာလိုက်သည်.Refuse to meet UN reprsentive but whenever Generals call her,she met and said nothing to public.Why?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်အပါအဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသည်ကို အားလုံးသတိရ ကြပါလိမ့်မည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်တို့နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သော NLD အဖွဲ့ဝင်များ ထမင်းလက်ဆုံစားသည်အထိ
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တတိယအကြိမ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်လာရြ
နိုင်ငံအပေါ်မှာ အမတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ တချိန်တခါမှာတော့ ပြည်သူကို အသိပေးရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အသိပေးတဲ့အခါ အသိပေးစရာရှိတဲ့အခါကျ အသိပေးမှာပါ။ အသိပေးစရာ မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ အသိပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် နောက်တခါ ဘာမှ အသိပေးစရာ မဖြစ်လာမှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်လေ”
Daw su,when will u tell us?
26 September 2012 at 06:14
puppet thein sein looks very neverous to come to UN assembly that's why he really want some help from Daw Suu.
Daw Suu has no rights to tell what's she has been talking with regime because if she reveal in public , it will definitely collapse all those process for country future.
I don't really understand why Thein Sein wanted to see DASSK physically.
They are in USA. If TS want to talk to her, he can talk on phone or video conference. Every telecommunication is available in USA.
All the events are scheduled months ago and need to be reschedule.
He should understand that this is not Burma.
26 September 2012 at 18:18
U r wrong.He needs to discuss for country.What is her schedule?Just to get the medal.Its not important for country.She doesent come to U.S as country representative.Her schedule is not important for country,just personal.
27 September 2012 at 18:09